पायथन र सुन्दर Soup संग एक वेबसाइट बाट डाटा स्क्रैप गर्न को लागी? - Semalt उत्तर
ए वेब स्क्रैप इन्जे उपकरण निकाल्नुहोस डेटा र यसलाई प्रस्तुत गर्दछ एक अद्वितीय ढाँचामा वेब खोजीकर्ताहरूलाई परिणामहरूको साथमा उनीहरूको आवश्यकतामा मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ. यसमा आर्थिक बजारमा धेरै अनुप्रयोगहरू छन्, तर अन्य अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. उदाहरणका लागि, प्रबन्धकले यसको प्रयोग विभिन्न उत्पादनको मूल्यको तुलना गर्न प्रयोग गर्छन्.
वेब स्क्रैपिंग पायथन संग
पाइजोन एक महान प्रोग्रामिंग भाषा हो महान महान वाक्य संग र पढने योग्य कोड. यो धेरै प्रकारको विकल्पहरूको कारणले शुरुआती शुरुवातहरू सूट गर्दछ. यसबाहेक, पाइथोनले सुन्दर सूप भनिने अनौठो पुस्तकालय प्रयोग गर्दछ. वेबसाइटहरू HTML को प्रयोग गरेर लेखिएका छन्, जुन वेबपेजको संरचित कागजात बनाउँछ. यद्यपि, प्रयोगकर्ताहरूलाई बिभिन्न बिभिन्न वेबसाइटहरू सम्झन आवश्यक छ कि उनीहरूको सामग्री सँधै सुन्दर ढाँचामा प्रदान गर्दैन. फलस्वरूप, वेब स्क्रैपिंग प्रभावकारी र उपयोगी विकल्प देखिन्छ. वास्तवमा, यसले प्रयोगकर्तालाई विभिन्न चीजहरू गर्ने मौका दिन्छ जुन तिनीहरूले Microsoft Word सँग प्रयोग गर्न थाले.
एलएक्सएमएल र अनुरोध
एलएक्सएमएल एक विशाल पुस्तकालय हो जसले छिटो र सरल HTML र XML कागजातहरू पार्स गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।. वास्तवमा, LXML लाइब्रेरीले XPath प्रयोग गरी सजिलै बुझ्न रूख संरचनाहरू बनाउन वेब सर्भरहरूको अवसर दिन्छ. विशेष गरी, XPath ले सबै उपयोगी जानकारी समावेश गर्दछ. उदाहरणको लागि, यदि प्रयोगकर्ताले निश्चित साइटहरूको शीर्षकहरू मात्र हटाउन चाहानुहुन्छ भने, उनीहरूलाई पहिलो पहिचान गर्न आवश्यक पर्दछ जसमा HTML तत्व अवस्थित छ.
कोडहरू सिर्जना गर्दै
शुरुआतीहरूले यसलाई कोडहरू लेख्न गाह्रो हुन सक्छ. प्रोग्रामिङ भाषाहरूमा, प्रयोगकर्ताले पनि सबै भन्दा आधारभूत प्रकार्यहरू लेख्नु पर्छ. बढि उन्नत कार्यहरूको लागि, वेब खोजीकर्ताहरूले आफ्नै डेटा संरचनाहरू बनाउनु पर्छ. यद्यपि, पाइजोन तिनीहरूको लागि एकदम ठूलो सहयोग हुन सक्छ, किनकि यसको प्रयोग गर्दा, तिनीहरू कुनै पनि डाटा ढाँचा परिभाषित गर्दैन, किनभने यो प्लेटफार्मले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो कार्यहरू प्रदर्शन गर्न अनोखा उपकरणहरू प्रदान गर्दछ।.
सम्पूर्ण वेब पेज स्क्रैप गर्नको लागि, उनीहरूलाई पाइजोन अनुरोध पुस्तकालय प्रयोग गरी यसलाई डाउनलोड गर्न आवश्यक छ. फलस्वरूप, अनुरोध लाइब्रेरी निश्चित पृष्ठहरूबाट एचटीएमएल सामग्री डाउनलोड हुनेछ. वेब खोजकर्ताहरूलाई केवल सम्झना चाहिन्छ कि फरक प्रकारका अनुरोधहरू छन्.
पाइजोन स्क्रैपिंग नियम
वेबसाइटहरु लाई स्क्रैपिंग गर्नु भन्दा पहिले, भविष्यमा कुनै पनि कानूनी समस्याहरूबाट बच्न प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको नियम र सर्तहरू पृष्ठहरू पढ्न आवश्यक पर्दछ।. उदाहरणको लागि, यो आक्रामक रूपमा डेटा अनुरोध गर्न राम्रो विचार होइन. उनीहरूलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तिनीहरूको कार्यक्रम मानव जस्तो काम गर्दछ. प्रत्येक सेकेन्ड एक वेबपेजको लागि एक अनुरोध एक महान विकल्प हो.
विभिन्न साइटहरूमा भ्रमण गर्दा, वेब खोजीकर्ताहरूले तिनीहरूको लेआउटमा आँखा राख्नु पर्छ किनभने तिनीहरू समय-समयमा परिवर्तन गर्छन्।. त्यसोभए, तिनीहरू त्यहि साइट पुन: भ्रमण गर्न आवश्यक छ र आवश्यक भएमा उनीहरूको कोडहरू पुन: लेख्न आवश्यक छ.
इन्टरनेटको डेटा फेला पार्न र लगाउँदै एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ र पाइजोनले यो प्रक्रिया सरल हुन सक्छ जस्तो लाग्न सक्छ। Source .